Boldenone Undecylenate: 8 Equipoise Side Mhedzisiro Iwe Yaunoda Kudzivisa
/Blog/Boldenone/Boldenone Undecylenate: 8 Equipoise Side Mhedzisiro Iwe Yaunoda Kudzivisa
Posted on 04 / 08 / 2019 by 阿斯劳 akanyora Boldenone.
5. 8 Equipoise (Boldenone Undecylenate) mhedzisiro yauchazoda kudzivirira
MUTSVENE unopa chechokwadi Boldenone Undecylenate / Equipoise,
Ndokumbirawo ubaye pano kuti uwane ruzivo rwekutaura. Cont Cont us
Pakusumwa, equipoise yaingoshandiswa chete nevechiremba vezvirwere kusvika gare gare muma1950 apo Ciba yakaunza iro giredhi revanhu. Vatsvakurudzi vakagadzira equipoise yemabhiza kuitira kuti vavandudze chishuwo chavo pamwe nehuremu hwakaonda hwemhasuru.
Zvimwe zvezvinodhaka izvo vashandi vomuviri vanoshandisa PCT ndezveNolvadex, Clomid, uye Arimidex. Icho ndicho chimwe chezvikonzero nei vazhinji vakasimbisa gurus vachifunga kushandisa Equipoise. Imwe nyaya ine Deca ndeyekuti inogara mune yako system kwenguva yakati wandei. Sezvo ichigona kuyedza zvakanaka mumuviri wako kweanoda kusvika makore maviri, vatambi vanoongororwa nguva zhinji vanosarudza kushandisa Equipoise. Equipoise yekuona nguva ingangoita mwedzi mishanu.
Kana zvasvika kune iyo boldenone undecylenate mhedzisiro vs. iyo deca mhedzisiro, equipoise inotakura zuva. Equipoise inozivikanwa kukonzeresa uyerogenic mhedzisiro senge acne, bvudzi kumeso, uye kurasikirwa nevhudzi nepo Deca inowanzo kuve yakabatana nekuchengetedza kwemvura uye gynecomastia.
Deca isarudzo yakanakisa kune avo vanotarisa kuwanda nepo equipoise inowanzo shandiswa mukucheka macircuit. Ndosaka vanhu vazhinji vachisarudza kushandisa boldenone yekucheka sezvo ichipa mhedzisiro.
Boldenone Undecylenate inogovera zvimwe zvakafanana ne testosterone kana zvasvika pakusimudzira kukuru. MaSteroid ese ari maviri anokunda uye akawana kugona ku:
Iwe uri kushamisika kuti chii chinonzi boldenone undecylenate inoshandiswa? Ipapo hausati waona iyo yekukwiza mhedzisiro iyo boldenone undecylenate mhedzisiro mukati. Kunyangwe zvichitora nguva yakati, iyi steroid inobvumira munhu kuti awane kuonda kwemhasuru mashura zvinoshamisa. Kuenzanisa Boldenone vs Deca Durabolin kana Anadrol, the boldenone results hazvizove yakakurumidza.
Kubatsira kwacho ndekwekuti zviwanikwa zvinogara kwenguva refu uye kwete semhedzisiro yekuchengetwa kwemvura. Saka kana iwe uchida kutaridzika uye uve hurukuro yeguta, Boldenone Undecylenate ndiyo nzira yekuenda.
Icho chikafu chakawanda kune wese munhu, uye vanhu vazhinji vanogona kukuwana kwakaoma kunyangwe kudya hafu yeiyo. Iwe unogona kunge uine icho chinangwa chekushandisa akawanda macalorie chete kuti uone kuti iwe wakamira usati waona kunyange shanduko mune yako saizi saizi. Nhau dzakanaka ndedzekuti imwe yeiyo boldenone inoshandisa mukuvaka muviri ndeyekugadzirisa zvinobata chishuwo chekudya saka ikubatsire kuzadzisa zvinangwa zvemuviri wako.
Boldenone Undecylenate is steroid yekucheka iyo inodzivirira kwazvo yehuremu hwakaonda hwemhasuru. Paunenge iwe uchinge waziva kumhanya equipoise mune yekucheka kutenderera, iwe unozoshamiswa nemabatiro aungaita kurasikirwa nawo ese asingadiwe mafuta apo tsandanyama dzako dzichiri dzakasimba. Yako Boldenone kumberi uye shure kwemifananidzo ichave humbowo hwekuti iwe uri munhu akasiyana zvachose.
Iwo maEquipoise macircuit anogona kuiswa muzvikamu zvinotevera:
Iwo anotangisa kutenderera-Kana iwe uri kushandisa Equipoisefor kekutanga, zvinokurudzirwa kuti utore 300-500mg yeTesttosterone Enanthate / Cypionate pamwechete ne400mg yeEquipoise pasvondo. Iyo yekutanga kutenderera inofanirwa kumhanya kweanopfuura gumi nemana mavhiki. Munguva ino, chero mutangi anogona kuona huwandu hwakakura hwekuwana pane mhasuru.
Chairo Boldenone uye Testosterone kutenderera kunogona kutaridzika seizvi;
Kazhinji, iyo Boldenone Undecylenate dosage masosi kubva ku200-400 mg pavhiki. Kune varume, muyero we400mg unoregererwa uye ndiwo muyero mudiki vazhinji vavo vanosarudza kutora. Vamwe vanoenda ku600mg nekuti inoshivirirwawo futi uye mhedzisiro mhedzisiro yequipoise inogoneka.
Tichifunga nezvequipoise 'chiitiko chakareba, varume vazhinji vanozvibata / vanopihwa jekiseni rimwe chete pasvondo. Iyo Boldenone Undecylenate muyero inogona zvakare kupatsanurwa kuita maviri kana matatu majekiseni madiki. Iyo yakareba Boldenone Undecylenate hafu-hupenyu inobvumidza yakajairika jekiseni chirongwa pamwe neanogona kudzoreredza mhedzisiro.
Kune vakadzi, iyo yakajairwa Boldenone Undecylenate dosage iri 50mg pasvondo. Neciyero ichi, virilization ishoma, asi kunzwisisika kwayo kunoenderana nemunhu. Vamwe vakadzi vanogona kushivirira muyero we75-100mg, asi iwe unorayirwa kuti usatange kuve neyero yakadaro kusvika iwe uine chokwadi chekuti muviri wako unogadzikana neiyo 50mg vhiki nevhiki.
Iyo mhedzisiro mhedzisiro yeEquipoise haina kuomarara seiya inokonzereswa nemamwe ma steroids. Avo vanoziva kumhanya equipoise nemazvo, havawanzo kunyunyuta nezve chero mhedzisiro.
Kuti uderedze kuomarara kwemhedzisiro, iwe unofanirwa kutora muyero wakakodzera. Unogona kutanga neiyo yakaderera dosi uye woiwedzera apo muviri wako unoenderera nekugadzirisa. Paunoita izvi, unogona kuyedza pane kwako kwemuviri kunzwisisika kune ino anabolic steroid.
Sezvo zviri zviviri anabolic uye androgenic steroid, Boldenone inogona kukupa iwe mhasuru chimiro uye saizi iyo yawakagara uchida uye panguva imwechete kuwedzera pane echirume hunhu senge acne uye oily ganda.
Boldenone cypionate ester ipfupi ichienzaniswa neiyo isina kugadzirwa. Boldenone Cypionate hafu-hupenyu hwakareba uye boldenone cypionate yekutsvaga nguva inogona kuenda kusvika pagore nehafu. Nekuda kweizvi, Boldenone Cypionate dosage inosanganisira kuva nemajekiseni akawandisa. Ndosaka avo vasingade majekiseni vasingashandisi Boldenone Cypionate steroid. Iyo yakajairwa Boldenone Cypionate muyero uri pakati pe100-150mg pa ml.
Iyo Boldenone Cypionate steroid inoshandiswa kurapa mabhiza kuvabatsira kuti vawedzere pahuremu pamwe nekuvandudza bvudzi ravo rebvudzi uye neyakajairika mamiriro emuviri.
Boldenone Acetate inonyanya kuzivikanwa seyepfupi-inoshanda Equipoise isteroid iyo ine ester yakasiyana yakanamatira pairi. Inonyanya kushandiswa mumijaho yemabhiza, asi vavaki vemuviri vanoida iyo Boldenone Acetate zvinobatsira kunyanya pane yakaonda tsandanyama. Iyo Boldenone Acetate dosage ndeye 400-800mg inotorwa kamwe pasvondo.
Pa internet, unogona kuverenga zvakawanda pane iyo steroid yaunoda kutenga. Semuenzaniso, pano iwe unogona kuverenga nezve iyo Boldenone Acetate recipe, Boldenone Cypionate homebrew, chii chinonzi Boldenone chakashandiswa uye chero chimwe chinhu chaungade kuziva nezvazvo. Nenguva yaunofunga nezvekuitenga, iwe unotove wakashongedzerwa neruzivo rwese rwekushandisa. Uye kuzviita kuti zvisatombonetseke kwauri, ruzivo rwese urwu rwunowanikwa pakunaka kweimba yako kana hofisi.
Zvitoro zvepamhepo zvinotengesa nemutengo uri nani kana uchienzaniswa nezvitoro zvepanyama. Mutengo weBoldenone unenge uchitengeka pamhepo nekuti unogona kuwana madhiri ari nani. Pamusoro pezvo, unogona kuwana zvidzikiso zvekutenga zvakawanda. Ndiani asingade kuchengetedza pane imwe mari?
The Boldenone inotengeswa ndeyemhando yepamusoro uye haimbokuodza moyo. Iyo haina kusvibiswa uye haizombofa yakaisa hutano hwako panjodzi. SVIRA webhusaiti yepamutemo inogadzira zvigadzirwa zvaro nenyika yezvigadzirwa zvemifananidzo. Unogona kuvimbiswa kuti yedu Boldenone yekutengesa inokupa iwe zvaunoda mhedzisiro.
Masteron Enanthate I Longer Inobata Androgenic Anabolic Steroid (AAS) Nzira Yokusarudza Steroid Powder Suppliers mu12 Matanho